Ankara Metrolari, Faahfaahinta Farsamada iyo Khariidadda | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAnkara Metro, Qeexitaanno Farsamo iyo Khariidad
15 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
ankara subways iyo khariidado
Ankara hoostiisa, nidaamka tareenka u adeega caasimadda ah ee Turkey ee Ankara. Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxaa maamula Agaasinka Guud ee EGO. Metro Marka hore, 28 Diseembar 1997 waxaa laga bilaabay wadada Bisha Cas Bisha Cas.
Kizilay-Cayyolu (M2) Subway wuxuu ka kooban yahay 16,59 km dherer laba jibaaran iyo saldhigyo 11. Qadka tareenka ayaa la buuxiyay oo la hirgaliyay xafladii 13.03.2014 waxaana loo wareejiyay Dowlada Hoose ee Ankara ee Magaaladda.
Length Dhererka xariiqa: 16.590 m.
Tirada Saldhigyada: 11
Cap Awoodda Rakaabka Rakaabka: 1.200.000 rakaab / maalin ah (awoodda ugu badan ee aragti ahaan hal jiho ah)
Khadkan, oo laga dhisay K fromzılay ilaa Koru; Necatibey, Maktabadda Qaranka, Söğütözü, MTA, METU, Bilkent, Wasaaradda Beeraha - Golaha Beytepe, Ümitköy, Çayyolu, Koru Station.
15,42 wuxuu ka kooban yahay khad dherer dhererkiisu yahay km laba jeer iyo shaqooyinka dhismaha saldhigga 11 Khadkii tareenka dhulka hoostiisa ayaa la dhammeystirey isla markaana loo furay adeegga iyada oo xaflad loo qabtay 12.02.2014 waxaana la gaarsiiyay dowladda hoose ee Ankara Metropolitan.
Length Dhererka xariiqa: 15.420 m.
Dhismaha iyo howlaha dhismaha xariiqa loogu talagalay xariiqda mitirka 10.582 iyo xarunta 11 ee u dhaxaysa Tandoğan iyo Keçiören waxay ka bilaabatay 15.07.2003. Qaybta daboolaysa xariiqda mitirka 9.220 iyo xarunta 9 ee u dhexeysa xarumaha Keçiören-AKM waxaa loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyada oo la raacayo borotokoolka lagu saxiixay 25.04.2011. Qadkaan, Wasaaradda ay khusayso ayaa biloowday howlaheeda iyadoo sameysa hindisada maalinta 13.12.2011, heshiiska uu ku egyahay taariikhda 02.02.2012, isla markaana ay la wareegeen Hay'adda 05.01.2017.
Wasaaradda Gaadiidka waxay sii wadaysaa qandaraaska (3,3 km line, 3 station) si loogu xiro Bisha Cas iyada oo loo sii marayo TCDD Speed ​​Speed ​​Train GAR oo laga soo qaado xarunta AKM.
Length Dhererka xariiqa: 9.220 m.
Tirada Saldhigyada: 9
Keçiören Kuyubaşı Xarunta Xiriirka Gaadiidka metelo ee YTT
Mashruuca daraasadda ayaa la soo gabagabeynayaa iyada oo la bilaabayo dhismaha mashruucan, rakaabkii ka degi doona Sıhhiye iyo Demirlibahçe oo ka imaan doona Sincan - Xaafadda Kayaş oo ay la socdaan rakaabka u dhow deegaanka Kızılay, sidoo kale rakaabka YHT ayaa awoodi doona inay gaaraan garoonka diyaaradaha Esenboğa. xarumaha wareejinta iyo khadadka nidaamka tareenka magaalada.
Ka sokow Saldhigga Kuyubaşı ee jira ee ku hoos jira Isku-xirka Nidaamka Raadinta Diyaaradda ee Esenboğa, xiriir toos ah oo ku socda tuneelka dabada ee xarunta cusub ee Kuyubaşı ayaa la bixin doonaa.
Awoodda rakaabka ee Wadada Mashiinka ee Keçiören waxaa lagu yareyn doonaa dhismaha khadkan.
Ka sokow marin-u-helka tooska ah ee madaarka Esenboğa ilaa jaamacadda Be-qoraal ee Yıldırım, goob bakhaar ayaa sidoo kale loo naqshadeyn doonaa meel u dhow xarunta Jaamacadda Yıldırım Beyazıt.
Ankara Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Madaarka-Yıldırım Beyazıt Isku-xirka Wadada-Dhulka
Eng Length Line: 26,2 km
Tirada Saldhigyada: 7
Speed ​​Xawaaraha Naqshadeynta: 120 km / saac
Cap Awooda Rakaabka: 700.000 rakaab / g
Waxaa loo qorsheeyay in lagu xiro isku xirka metrooga Tandoçan - Kereniören (M4) ee ka baxa Kuyubaşı Station si loogu xiro garoonka Esenboğa iyo Jaamacadda Yıldırım Beyazıt iyo xargaha metrooga ee bartamaha magaalada.
Shaqada-mashruuca daraasadda ayaa la soo gabagabeeyey waxaana la go’aamiyay in ay fuliso Wasaaradda iyada oo ay go’aanka gaadhay Golaha Wasiirrada.
Iibsiga Gawaarida Ankara Metros
Qandaraaska waxaa lagu saxiixay 13.08.2012.
The Mashruuca, jirka gawaarida waxaa laga sameyn doonaa bir aan kala maarmin. Wajahadda hawshan dhexdeeda, gawaarida 324 (108 set) ayaa la sameyn doonaa si loo cusbooneysiisto gawaarida Ankara. qalabka Kuwanu waa 177 Total (59 set) waxaa soo saaray ee Shiinaha, tirada 147 (set 49) halka dalka Turkiga ayaa bilaabay in wax soo saarka May 2017. Ilaa dhammaadka Sebtembar 2018 ayaa la dhammaystiray oo gawaarida 222 (74 set) oo ka gudbey imtixaannada si guul leh loo gaarsiiyey Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara. Xadiga ugu yar ee tabarruca qoyska ee 75 waxaa lagu sheegaa gaariga ugu horreeya ee 30, oo ay kujirto jirka, iyo ugu yaraanta tabarruca guriga ee 51 ee gawaarida harsan ayaa lagu qeexay.
Saacadaha Shaqada ee Ankara
Ankara Metro, oo ay isticmaalayaan malaayiin qof maalin kasta waana gaadiid la isku halleyn karo oo xallinaya dhibaatooyinka taraafikada illaa xad, waa sida soo socota:
Subaxdii: 06: Waxay ka bilaabataa 00.
Waqtiga habeenkii: 01: Wuxuu damiyaa 00.
Wadada tareenka ee Ankara waxay furan tahay xilliyada ciidaha iyo ciidaha dadweynaha.
Istanbul, Izmir iyo Ankara Metro oo ka socda Wasaaradda…
Mansur Yavaş dadka reer Ankara! .. 'Metros 5…
Wadada tareenka ee Keçiören Atatürk